uru nke oku na-agbaze na induction | induction igwe ihe eji eme oku | ihe ndozi oku
uru nke ọkụ na-agbaze na induction
Kedu ihe nkwụsị na-agba ume?
Mmiri na-agbaze bụ usoro ebe agbazeze ọla n'ime ụdị mmiri mmiri ọkụ. Mgbe ahụ, a wụsara ọla a wụrụ awụ site na ọkpụkpọ anụ ahụ, na-abụkarị n'ime ihe nkedo.
Mmiri na-agbaze dị nnọọ ngwa ngwa, dị ọcha na edo. Mgbe emere ya n'ụzọ ziri ezi, mmịnye ntinye dị ọcha nke na ọ ga-ekwe omume ịwụsa ọkwa dị ọcha na ụzọ ndị ọzọ. Igwe ọkụ a na-etinye na ígwè ahụ na-enye aka na njedebe dị elu. DaWei Induction agbaze oku emeela atụmatụ ergonomic. Ọ bụghị nanị na ha na-eme ka ọrụ rụọ ọrụ nchebe karị, ha na-abawanye na arụpụtaghị ihe site n'ịme ka usoro ịgbaze ahụ dịkwuo mfe. Ebee ka eji ya? DaWei Sistem na-agbaze ihe ejiri mee ihe na nchọta, mahadum, laboratories na ebe nyocha. Usoro ahụ gbazere ihe niile site na metal na-abụghị ferrous na ngwá nuklia na ọgwụ / allian dentistry.
Kedu ngwá ọrụ / ọkụ dị?
DaWei Induction Heating Machine Co na-enye ọtụtụ dị iche iche oku oku usoro dị iche iche na-adabere n'ọtụtụ dịgasị iche iche na-agbaze: otu-axis tiltpour, abụọ-axis tilt-pour, coil moving, rollover na laabu.
Categories FAQ Tags uru nke ọkụ na-agbaze na induction, Otu esi achọ oke ọkụ ọkụ, kedu ihe ị na-eme na-agbaze, kedu ihe mere ị ga-ahọrọ igwe agbaze na induction